मन्त्रीभन्दा 'पावरफुल' क्रसर डन, जसले गराउँछन् जिल्लामा सिडियो र एसपीको सरुवा
पत्रपत्रिकाबाट , १ माघ २०७६, बुधबार, ०८:४९ am
१. सत्तारुढ दलको पहलमा नुवाकोट पुगेका एसपी सरुवा
गत वर्ष नुवाकोटका क्रसर व्यवसायीहरू गृह मन्त्रालय धाइरहेका थिए । आफूअनुकूलका एसपीलाई लैजान उनीहरूले सत्तारुढ नेकपा नेताहरूलाई भेटिरहेका थिए । आफूहरूको खानी र क्रसरलाई सहयोग गर्ने एसपी उनीहरू नुवाकोट लैजान चाहन्थे । उनीहरूकै रोजाइअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी कृष्णबहादुर पल्लीमगरलाई पठायो । पल्लीमगर पुगेपछि खानी र क्रसरको व्यवसाय चम्कियो, नदीको दोहन अनियन्त्रित भएको भन्दै स्थानीयको विरोध पनि चुलियो । नदीको दोहनमा प्रहरी नेतृत्वको मिलेमतोको खुलस्त भएपछि ६ महिनाभित्रै पल्लीमगरलाई झिकाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय बाध्य भयो ।
२. क्रसरकै कारण गोरखामा सिडिओ र एसपीबीच विवाद
गत वर्ष गोरखामा बालुवा खानी तथा क्रसरकै कारण एसपी र सिडिओबीच विवाद भयो । खासमा खानी तथा क्रसर उद्योगीबाट प्राप्त आम्दानी बाँडफाँडमा उनीहरूबीच भएको विवाद बाहिर आएको थियो । सिडिओ नारायणप्रसाद भट्टराईले खानी सञ्चालकलाई संरक्षण गरेको आरोप एसपी विमल बस्नेतको थियो । सोही विवाद चर्किएपछि दुवैजनालाई गृह मन्त्रालयले सरुवा गरेको थियो । त्यसपछि पनि गोरखामा एक दर्जन खानीहरू अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
३. क्रसरमा प्रहरीको सेयर, हेर्न जाँदा डिआइजीको मृत्यु
कतिपय जिल्लामा सिडिओ र प्रहरी अधिकारीहरूले नै आफन्तको नाममा क्रसर र खानीमा सेयर लिएका छन् । आफूले सेयर पाएको बालुवाखानीकै बारेमा बुझ्न जाँदा डिआइजी सुशील भण्डारी चढेको गाडी एक वर्षअघि मण्डन–देउपुरमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो, जहाँ उनको समेत निधन भयो । त्यस्तै, डिएसपी सुकदेव खनाल काभ्रेमा कार्यरत रहँदा बेथानचोकस्थित एक क्रसर उद्योगको सेयर श्रीमतीको नाममा लिएका थिए ।
हरिया डाँडा तहसनहस, गाउँका गाउँ उठिवास
काभ्रेको पनौती नगरपालिका–२ रोसी खोलाकी ५७ वर्षीया शारदा थापा गत २७ असारको दिउँसो आँगनमा थिइन् । निरन्तरको वर्षा रोकिएको एक दिन मात्रै भएको थियो । डायमन्ड रोडा तथा ढुंगा खानी उद्योगको एक्साभेटरले आधा खनेको घरमाथिको बाघवीर डाँडोबाट ढुंगाको पहिरो खस्न थाल्यो । हेर्दाहेर्दै घरको आधा भाग पहिरोले बगाएर रोसी खोलाको बगरमा पुर्यायो । दिउँसो भएकाले उनी बल्लबल्ल बाँचिन् ।
‘भिर भत्किँदा डाँडो नै थर्किने गरी आएको आवाजले मुटु नै फुट्लाझैँ भयो । घर पहिरोले लग्यो, दिउँसो भएकाले धन्न बाँचेँ । नत्र मेरो त्यहीँ चिहान हुने थियो,’ शारदाले मंगलबार सात महिनाअघिको कहालीलाग्दो घटना नयाँ पत्रिकालाई सुनाइन् । दुई वर्षअघि डायमन्ड रोडा उद्योगले सिंगै बाघवीर डाँडो किन्यो । लगत्तै सञ्चालक दीपक भण्डारीले घरसहितको जग्गा बेच्न थापालाई दबाब दिन थाले, तर उनले मानिनन् । त्यसपछि भण्डारीले एक्साभेटर ल्याएर घरमाथिको डाँडो धमाधम खन्न थाले । त्यसको कम्पनले खल्बलिएको भिर लगातारको वर्षाले २७ असारमा भत्कियो ।
केही महिनापछि भण्डारी फेरि थापाकहाँ आए र जग्गा बेच्न पुनः धम्क्याउन थाले । ज्यान नै जोखिममा राखेर अब यहाँ बस्न उनलाई आँट आएन । केही सीप नलागेपछि बारी र घरसहितको साढे ६ रोपनी जग्गा ७५ लाख रुपैयाँमा बेचिन् । त्यो रकमले बनेपामा तीन आना जग्गा किनिन् । अहिले उनीसँग भएको सम्पत्ति त्यत्ति हो । ‘फाली बिगारेर सियो बनाएझैँ भएको छ । तीन भाइ छोरा छन् । यति सम्पत्तिले के गर्ने हुन् थाहा छैन । खानी उद्योगले मेरो त घरबार नै उठायो,’ उनले भनिन् ।
अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर-खानीको न्यूनतम मापदण्ड तोक्न सिफारिश
एसपी दानबहादुर मल्ललाई १२ घण्टाभित्र चितवन छोड्न अल्टिमेटम
रोडा–ढुङ्गा उद्योग दर्ता नगरी निर्वाध सञ्चालनमा
काभ्रेका मापदण्ड विपरीतका क्रसर–खानी बन्द गर्न जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको निर्देशन
क्रसर डनको दादागिरी, लिभरले कोखमा हिर्काएर घाइते बनाएपछि टिपरले किनेर दिलिपको हत्या
भ्रष्टहरुलाई पद र पार्टी नहेरी कारवाही गर्न भीम रावलको माग
वायुसेवा निगमलाई कम्पनीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी
वाग्मती प्रदेश सरकारको निर्णय, अब जनप्रतिनिधिले तलबको सट्टा भत्ता पाउने
भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै संसदमा सरकार र प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना
ट्रम्पले भने-‘अमेरिका महात्मा गान्धीको दृष्टिकोणमा उभिन्छ’
लघुवित्तमा कार्यरत कर्मचारीबाटै ६० लाख ७० हजार अनियमितता, बैंकिङ कसुरमा पक्राउ
६१ अर्बको हुलाकी राजमार्गको प्रगति ४८ प्रतिशत, ३८५ किमी कालोपत्र